यूहन्ना ७ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
७ अब यी कुराहरू भएपछि येशू गालीलमै घुमफिर गरिरहनुभयो, किनकि यहूदीहरूले आफूलाई मार्न खोजिरहेकोले उहाँ यहूदियामा घुमफिर गर्न चाहनुभएन। २ तब यहूदीहरूले मनाउने झुप्रोबासको चाड नजिकै थियो। ३ त्यसैले उहाँका भाइहरूले उहाँलाई भने: “यहाँबाट निस्केर यहूदिया गइहाल्नुहोस् र तपाईंका चेलाहरूले पनि तपाईंका कामहरू देखून्‌। ४ किनकि मानिसहरूले चिनून्‌ भनी इच्छा गर्ने कसैले पनि कुनै काम गुप्तमा गर्दैन। यदि तपाईं यी कामहरू गर्नुहुन्छ भने आफैलाई संसारसामु प्रकट गर्नुहोस्।” ५ वास्तवमा, उहाँका भाइहरू उहाँमाथि विश्वास गर्दैनथे। ६ त्यसैले येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मेरो बेला आइपुगेको छैन। तिमीहरूलाई त जुन बेला पनि ठीक छ। ७ संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्ने कुनै कारण छैन तर मलाई भने घृणा गर्छ, किनकि त्यसका कामहरू दुष्ट छन्‌ भनी म साक्षी दिन्छु। ८ तिमीहरू चाड मनाउन जाओ; तर म भने अहिले चाड मनाउन जान्नँ, किनकि मेरो बेला आइपुगेको छैन।” ९ त्यसैले तिनीहरूलाई यी कुरा भनिसकेपछि उहाँ गालीलमै बस्नुभयो। १० तर आफ्ना भाइहरू चाड मनाउन गइसकेपछि उहाँ पनि जानुभयो तर कसैले नदेख्नेगरि सुटुक्क जानुभयो। ११ त्यसैले यहूदीहरूले चाडको बेला यसो भन्दै उहाँलाई खोज्न थाले: “खोइ त्यो मानिस?” १२ अनि भीड उहाँको विषयमा निकै खासखुस गर्दै थियो। कोही भन्थे: “ऊ असल मानिस हो।” अनि अरूचाहिं भन्थे: “अहँ, होइन। किनकि उसले भीडलाई बहकाउँछ।” १३ तर यहूदीहरूसित डराएर कोही पनि उहाँको विषयमा खुलेआम कुरा गर्दैनथे। १४ चाडको बीचतिर येशू उक्लेर मन्दिरभित्र पस्नुभयो र सिकाउन थाल्नुभयो। १५ त्यसैले यहूदीहरू छक्क पर्दै यसो भन्न थाले: “यो मानिसले पाठशाला गएर पढेको छैन, तैपनि यसले यत्ति धेरै ज्ञान अनि शिक्षा कहाँबाट पायो?” १६ यो सुनेर येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “म जे सिकाउँछु, त्यो मेरो होइन तर मलाई पठाउनुहुनेको शिक्षा हो। १७ यदि कोही उहाँको इच्छा पूरा गर्न चाहन्छ भने मेरो शिक्षा मेरो आफ्नै हो कि परमेश्वरको हो, त्यो उसले थाह पाउनेछ। १८ जसले आफ्नो तर्फबाट बोल्छ, उसले आफ्नै महिमा खोजिरहेको हुन्छ। तर जसले आफूलाई पठाउनेको महिमा खोज्छ, ऊ सत्य हो र उसमा कुनै असत्य हुँदैन। १९ के मोशाले तिमीहरूलाई व्यवस्था दिएका होइनन्‌ र? तर तिमीहरूमध्ये कोही पनि व्यवस्था पालन गर्दैनौ। तिमीहरू किन मलाई मार्न खोज्दैछौ?” २० भीडले जवाफ दियो: “तिमीमा दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेको छ। कसले तिमीलाई मार्न खोजेको छ र?” २१ येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “मैले एउटा काम के गरें, तिमीहरू सबै छक्क पऱ्यौ। २२ त्यसैले यो कुरा विचार गर, मोशाले तिमीहरूलाई खतनाको* नियम दिए (हुन त यो चलन मोशाको पालामा होइन तर पितापुर्खाको पालामै सुरु भएको थियो) अनि तिमीहरू विश्राम-दिनमा खतना गर्छौ। २३ मोशाको व्यवस्था उल्लङ्घन नहोस् भनेर यदि तिमीहरू विश्राम-दिनमा खतना गर्छौ भने मैले विश्राम-दिनमा एक जना मानिसलाई निको पारें भनेर किन रिसले चूर हुन्छौ? २४ बाहिरी रूप हेरेर न्याय गर्न छोड, बरु ठीकसित न्याय गर।” २५ त्यसैले, यरूशलेमका केही बासिन्दाहरूले यसो भन्न थाले: “तिनीहरूले मार्न खोजेको मानिस यही होइन र? २६ तैपनि हेर त, मानिसहरूसामु यो बोल्दैछ अनि तिनीहरू यसलाई केही पनि भन्दैनन्‌। यो मानिस साँच्चै ख्रीष्ट हो भनेर शासकहरूले* थाह पाएछन्‌ कि कसो? २७ यो मानिस कहाँको हो हामीलाई थाह छ, तर जब ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, उहाँ कहाँको हो भनेर कसैले थाह पाउँदैन।” २८ यो सुनेर मन्दिरमा सिकाइरहनुभएको येशूले ठूलो स्वरमा भन्नुभयो: “म को हुँ अनि कहाँको हुँ, तिमीहरूलाई दुवै थाह छ। साथै, म आफूखुसी आएको होइन तर मलाई पठाउने जो हुनुहुन्छ, उहाँ साँच्चै अस्तित्वमा हुनुहुन्छ र तिमीहरू उहाँलाई चिन्दैनौ। २९ तर म उहाँलाई चिन्छु, किनकि म उहाँको प्रतिनिधि हुँ र उहाँले नै मलाई पठाउनुभएको हो।” ३० त्यसैले तिनीहरूले उहाँलाई पक्रन खोजे तर कसैले उहाँमाथि हात हालेन, किनकि उहाँको बेला अझै आइपुगेको थिएन। ३१ तैपनि, भीडमा हुनेहरूमध्ये धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे; अनि तिनीहरू यसो भन्न थाले: “जब ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, के उहाँले यी मानिसले भन्दा धेरै चमत्कार गर्नुहोला र?” ३२ उहाँको विषयमा भीडले यी कुरा खासखुस गरिरहेको फरिसीहरूले सुने। तब उहाँलाई पक्रन मुख्य पुजारीहरू अनि फरिसीहरूले मन्दिरका पहरेदारहरूलाई पठाए। ३३ तब येशूले भन्नुभयो: “जसले मलाई पठाउनुभयो, उहाँकहाँ जानुअघि अब केही बेर म तिमीहरूसित हुनेछु। ३४ तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ तर फेला पार्नेछैनौ र म जहाँ हुन्छु, त्यहाँ तिमीहरू आउन सक्दैनौ।” ३५ त्यसैले यहूदीहरू आपसमा यसो भन्दै कुरा गर्न थाले: “हामीले फेला पार्न नसक्ने गरी यो मानिस कहाँ जाँदैछ? ग्रीकहरूमाझ छरिएका यहूदीहरूकहाँ गएर यसले ती ग्रीकहरूलाई सिकाउने विचार गर्दैछ कि कसो? ३६ अनि ‘तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ तर फेला पार्नेछैनौ र म जहाँ हुन्छु, त्यहाँ तिमीहरू आउन सक्दैनौ’ भनेर यसले के भन्न खोजेको?” ३७ तब चाडको अन्तिम अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनमा येशू उभिरहनुभएको थियो र ठूलो स्वरमा उहाँले भन्नुभयो: “यदि कसैलाई तिर्खा लागेको छ भने ऊ मकहाँ आओस् र पिओस्। ३८ जसले ममाथि विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भनेजस्तै ‘उसको मनको गहिराइबाट जीवन दिने पानीको खोला बग्नेछ।’ ” ३९ उहाँले यी कुरा आफूमाथि विश्वास गर्नेहरूले पाउन लागेको पवित्र शक्तिको विषयमा भन्नुभएको थियो। तर त्यतिबेलासम्म उहाँ गौरवान्वित भइसक्नुभएको थिएन, त्यसैले कसैले पनि पवित्र शक्ति पाएको थिएन। ४० तब भीडमा हुनेहरूमध्ये कसै-कसैले उहाँको यो कुरा सुनेर यसो भन्न थाले: “यी मानिस पक्कै पनि भविष्यवक्ता हुनुपर्छ।” ४१ अरूचाहिं यसो भनिरहेका थिए: “यी मानिस ख्रीष्ट हुन्‌।” तर केहीले यसो भने: “ख्रीष्ट पनि कहीं गालीलबाट आउँछन्‌ र? ४२ ख्रीष्ट दाऊदको सन्तानबाट अनि जहाँ दाऊद बस्थे, अर्थात्‌ बेतलेहेमको गाउँबाट आउनेछन्‌ भनेर के धर्मशास्त्रले बताएको छैन र?” ४३ तब उहाँको विषयलाई लिएर भीडमा फूट उत्पन्न भयो। ४४ यद्यपि, तिनीहरूमध्ये कोही-कोही उहाँलाई पक्रन चाहन्थे तर कसैले पनि उहाँमाथि हात हालेन। ४५ त्यसैले मन्दिरका पहरेदारहरू फर्केर मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरूकहाँ गए अनि तिनीहरूले ती पहरेदारहरूलाई सोधे: “तिमीहरूले किन उसलाई पक्रेर ल्याएनौ?” ४६ पहरेदारहरूले जवाफ दिए: “यो मानिसले जस्तो त कसैले बोलेको छैन।” ४७ तिनीहरूको कुरा सुनेर फरिसीहरूले सोधे: “तिमीहरू पनि बहकियौ कि कसो? ४८ शासक वा फरिसीहरूमध्ये के कसैले त्यसमाथि विश्वास गरेको छ र? ४९ तर मोशाको व्यवस्था नजान्ने यो भीड श्रापित हो।” ५० तब उहाँलाई पहिला भेट्न जाने निकोदेमस, जो तिनीहरूमध्येकै एक जना थिए, उनले तिनीहरूलाई भने: ५१ “हाम्रो व्यवस्थाअनुसार कसैलाई दोष लगाउनुअघि उसको कुरा सुन्नु अनि उसले के गर्दैछ, त्यो बुझ्नु आवश्यक छैन र?” ५२ उसको कुरा सुनेर तिनीहरूले भने: “के तिमी पनि गालीलकै हौ र? धर्मशास्त्रमा खोजेर हेर, गालीलबाट भविष्यवक्ता आउनेछ भनेर कतै लेखिएको छैन।” कोडेक्स साइनाइटिकस, कोडेक्स भ्याटिकनस र साइनाइटिक सिरियाक कोडेक्स पाण्डुलिपिहरूमा ७:५३ देखि ८:११ सम्मका पदहरू पाइँदैन। (विभिन्न ग्रीक लेखोट अनि अनुवादहरूमा केही भिन्नता भए तापनि) ती पदहरूमा यस्तो लेखिएको छ: ५३ तब तिनीहरू आ-आफ्नो घर गए।
^ यूह ७:२२ * लूका १:५९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ यूह ७:२६ * वा, “यहूदी न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले।”